Qorshihii shir Muqdisho oo loo dhanayhay oo galay marxalad fawdo ah - WardheerNews
Qorshihii shir Muqdisho oo loo dhanayhay oo galay marxalad fawdo ah
Muqdisho (WDN)- Warar soo gaadhaya WardheerNews, ayaa sheegay in shir wadatashi ay Dowlad Gobolleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, lagu wado in uu ka dhaco magaalada Baydhabo.
Shirkii Dhuusamareeb 3
Warka kulanka sadex geesoodka ee Bydhabo, oo aan wali si rasmi ah uga soo bixin sadexda Dowlad Gobolleedyo, ayaa u eeg mid lagu xagal daacinayo shir guud oo la filayay in uu ka dhaca Muqdisho, oo dhex mara DFS iyo Dowlad Gobolleedyada oo dhan.
Shirka Baydhabo, ayaa la shegayaa in sadexda Dowlad Gobolleed ee Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay kaga arinsanayaan sidii mowqif midaysan oo ku aadan goa’aanadii shirkii Dhuusamareeb 3, ay ugu qaadan lahaayeen shirarka dambe ee loogaga hadlayo arimaha hanaanka doorashooyinka.
Dad wax ka qora arimaha Soomaaliya, oo ay WardheerNews wax ka weydiisay shirka Baydhabo, ayaa sheegay in arinka shirka Baydhabo uu u muuqdo fawdo iyo qorshe xumo, islamarkaana ay iska cadahay in uu ka dambeeyo Madaxweyne Farmaajo, si markaasi ay u kala qaybsanaadaan Dowlad Gobolleedyadu, oo Puntland iyo Jubbaland mowqifkooda loo helo qorshe lagu wiiqo, seeto dheerayn iyo is jiitan loogu gogol xaaadhayo muddo korodhsina salka ku haya.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa ilaa hadda ku sugan Muqdisho, iyaga oo ku adkeystay in shirka wadatashi oo Muqdisho ka dhaca, ay lagama maarmaan u tahay ka qeybgalka dhamaan Dowlad Gobolleedyadu.
Waxaa la filayaa in ka gadaal shirka Baydhabo dadaal hor leh loo galo sidii la iskula garan lahaa goobta lagu wada kulmayo, si loo soo gabagabeeyo is-fahamdarada ka jirta hanaanka doorashooiynak 20/21. Arinkaasi oo u eeg mid wakhti qaadan kara.